अजंग हात्तीका नङ काट्दा – Khabar Patrika Np
अजंग हात्तीका नङ काट्दा
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण १८, २०७७ समय: ९:१८:५८
चितवन — अजंगको जनावर हात्तीको स्याहार गर्नु सजिलो छैन । बेला–बेला विभिन्न औषधि खुवाउनुपर्छ । मानिसको जस्तै समय–समयमा नङ पनि काटिदिनुपर्छ । यसका लागि मिहिनेत, ज्ञान र अनुभवको खाँचो पर्छ ।
पशु स्वास्थ्य प्राविधिक किरण रिजाल सोमबार खोरसोरको हात्ती प्रजनन् केन्द्रमा हात्तीको नङ काट्दै
खोरसोरमा छावाको छुनु र मुनु
कोषमै कार्यरत पशु चिकित्सक डा. अमिर सडौलाका अनुसार नङको समस्या हात्तीको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो । ‘जंगली हात्ती खुला रूपमा आफ्नो सुरले हिँड्छ । तर घरपालुवा हात्ती मानिसको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरूले हिँडाएको ठाउँमा जानुपर्छ । हात्तीहरू खोलाको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा तथा पिच बाटोमा पनि हिँड्नुपर्छ । यसले समस्या ल्याउँछ,’ डा. सडौलाले भने । आफ्नो हिसाबले टेक्न र जंगलीको तुलनामा घरपालुवा हात्ती धेरै हिँड्न पनि नपाउने भएकाले उनीहरूको नङ छिटो बढ्छ । घरपालुवा हात्तीमा देखिने ४० प्रतिशत स्वास्थ्य समस्या नङका कारण उब्जने पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको अनुभव छ ।
कोषको सौराहा कार्यालय प्रमुख बाबुराम लामिछानेले जंगली हात्तीको जस्तो स्वभाव घरपालुवामा पनि हुने बताए । तर मानिसको नियन्त्रणमा रहेकाले यस्ता हात्तीको प्राकृतिक क्रियाकलापमा धेरथोर अवरोध पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवरोधले स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ । त्यही भएर बेलाबेलामा परीक्षण र सुधार गर्नुपरेको हो,’ उनले भने ।
हात्तीलाई हुर्काउन र काममा लगाउन ठूलो लगानी हुन्छ । स्वास्थ्यमा ख्याल नराखे हात्ती गुमाउनुपर्ने खतरासमेत रहन्छ । चितवन निकुञ्जका अनुसार यो वर्ष मात्रै विभिन्न कारणले ५ वटा हात्ती मरेका छन् । हात्तीमा क्षयरोगको समस्या पनि अधिक देखिन्छ । पछिल्लो २ वर्षमा यसकै कारण पाँचवटा हात्ती मरेका थिए । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उचित स्याहारले हात्ती जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. श्रेष्ठले बताए । चितवन निकुञ्जमा अहिले सरकारी संरक्षणमा ५६ वटा र निजी क्षेत्रले ६० वटा हात्ती पालेका छन् ।
आउँदो चैतदेखि चितवन निकुञ्जमा गैंडा गणना हुँदै छ । गैंडा गन्न हात्ती नभई हुँदैन । हात्तीमाथि चढेर जंगल डुल्दै एक–एक गैंडाको विवरण उतार्नुपर्छ । २०/२२ दिन लगातार जंगल हिँड्ने हात्ती स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । उक्त जाँचका लागि सोमबारदेखि सौराहामा ‘हात्तीको बृहत् स्वास्थ्य शिविर’ सुरु भएको छ ।
१५ दिनसम्म चल्ने शिविरबाट छानिएका स्वस्थ हात्तीलाई मात्र गणनामा खटाइनेछ । ‘यसका लागि हात्तीलाई अहिल्यै जुकाको औषधि दिनेछौं । रगतको नमुना झिकेर शारीरिक अवस्था विश्लेषण गर्नेछौं । नङ पनि काटेर दुरुस्त राख्नेछौं,’ डा. श्रेष्ठले भने । खोरसोरमा रहेको हात्ती प्रजनन केन्द्रबाट यो अभियान सुरु भएको हो ।